NOOCYO STRAWBERRY "ALBION": XEERARKA BEERITAANKA IYO SII KORDHAYA - STRAWBERRIES
Way adag tahay in maanta la helo qof aan isku dayaynin strawberries ee noloshiisa.
Magaca labaad ee raaxada this waa strawberries beerta. Wax kasta oo ay adag tahay in la kobciyo tan ama nooca berrito ah, dadka sanad kasta midkoodba waa ku tallaalidda duurka, ama ay ka baxaan ubaxyo cusub.
Kuwa ugu caansan waa kuwa kala duwan, berry ah oo gaaraya qiyaaso waaweyn oo dhadhan fiican leh. Mid ka mid ah noocyada kala duwan ee strawberry waa Albion kala duwan.
Si aad u hesho miro wanaagsan, uma baahnid inaad haysato waxbarasho gaar ah ama sannado badan oo waayo-aragnimo ah oo ku tarma dhaqankaan gaarka ah. Dabcan, waxaa jira tilmaamo gaar ah oo ku saabsan daryeelka noocyo kala duwan, laakiin dhaliddu waxay noqon doontaa mid aad u sareysa kiis kasta.
Goobta dhirta kala duwan ee loo yaqaan "Albion" waa Jaamacadda Kaliforniya, oo ah nooc ka mid ah noocyada noocan ah ayaa laga diiwaangeliyey 2006.
"Albion" - noocyo kala duwan, taas oo ah, ma falcelinayso muddada iftiinka iftiinka oo midho dhaadheer ku jira dhowr hirar.
Dhirta waa mid xoog leh oo xoog leh, caleemo adag, iyo peduncles ayaa lagu aasaasay meel qumman, sidaas darteed xitaa miraha ugu weyn kuma dhici karo dhulka. Caleemaha noocyada kala duwan ayaa sidoo kale xiiso leh - waxay leeyihiin sheen oily ah, taas oo u muuqata mid aad u fiican oo ka soo horjeeda midabka midab madow.
Miraha waa weyn, celcelis ahaan waxay heleen 40 - 60 g, casaan mugdi ah iyo dhalaalaya dibedda, casaan gudaha ah, oo leh dhadhan raaxo leh. Qaabka nooca berry ah waa mid adag, wax yar ka yar.
Jirka waa mid aad u cufan oo adag, wuxuuna leeyahay caraf udgoon. Sababtoo ah dabeecadihiisa in noocyada kala duwan ayaa si fiican loo raraa, iyo nooca berry ma sii xumaanayo ama boogo. Haddii aad si fiican u daryeesho dhirta, ka dibna hal baadiyaha ayaa la soo ururin karaa qiyaastii 2 kg ee berry bislaaday.
Faa'iidooyinka sidoo kale waxaa ka mid ah heer sare dulqaadkii abaaraha. Nasiib darro, iska caabinta qabowgu waa dhexdhexaad, marka markaad ku korodho meelaha cimiladu ka fog tahay kulaylaha ama shucaaca, waxaad u baahan tahay inaad daboosho dhirta jiilaalka.
Inta badan dhan ee miro yar yar ee "Albion" waxay bixiyaan 4 jeer xilli - xilli dambe May, horraantii Luulyo, dhammaadka Agoosto iyo bartamihii Sebtembar. Sidoo kale, kala duwanaantani ma saameynayso anthracosis iyo caaryada cawl.
Si strawberries siiyay goosashada wanaagsan, waxaad u baahan tahay inaad doorato meesha saxda ah beerta.
Sidaa awgeed waxaad u baahan tahay inaad qayabiso qayb ka mid ah dhulka, oo ku yaalla koonfurta-galbeed, waana fiicnaan lahayd haddii meesha uu ku yaal meel yar oo ah xagal yar.
Kama shubi kartid geedaha meesha diiqada ama dooxada, sababtoo ah waxaa jiri doona qoyaan aad u sarreeya iyo heerkul hooseeya.
Ka hor inta beerto, ciidda u baahan yahay in la diyaariyo, kuwaas oo, waxaa lagama maarmaan ah in ay qodaan, heerka iyo in la daboolo dhamaan dhismaha Bacriminta, sidoo kale, waxaa lagama maarmaan ah in lagu dalbado arrinta organic.
Laga bilaabo wakhtiga beerto, geedo waxaa lagu beddeli karaa bilowga Sebtembar ama horraanta gu'ga ka dib marka dhaxan dhammaadka. In jawiga cimilada, kala duwan tani waxaa lagu kori karaa dhulka u furan, laakiin waxaa guud ahaan lagu talinayaa in koraan Albion ee lagu koriyo.
Geedo ma kori doono oo horumarin doonaa dhulka, heerkulka taas oo ka hooseeya + 15 + 16 ̊С. Geedo ayaa kori kara gacmahooda, laakiin waad soo iibsan kartaa.
Ka hor inta beeri on geedo wanaagsan waa inay muuqataa 5-6 caleemo iyo nidaam xidid si fiican u horumarsan, kaas oo lagu soo bandhigi doonaa foomka of a lobe ah.
Qaadashada geedo strawberry waxay dhacdaa xilliga marka 1 ilaa 2 caleemo ay horeyba u sameeyeen seedling kasta.
Daadinta dheriyada cusub waa in ay ahaato mid ku filan oo ku filan, inta u dhaxeysa 5-7 cm, sidaa daraadeed duurka dhalinyaradu maaha dad badan. Pre-diyaarinta geedo strawberry waxaa ka mid ah yaraynta tirada caleemaha si 1 - 2, iyo sidoo kale xididdada gooyaa ilaa dherer ah 6 - 7 cm.
Beerta, duurka ku xiga waa in lagu dhajiyaa fogaan ah ugu yaraan 15 cm, iyo sariiro beerta deriska ah waa in ka badan 70 cm oo kala gooni ah. Waxaa wanaagsan in la doorto maalin qashinka ah si ay u beerto si ay qorraxda qorraxdu u dhibto oo aan wax u dhicin beerka beerta hore ee daciifka ah.
Waraabinta dhirta ka dib ee geedo waa inay gaarto mugga 0.5 litir iyo wax kabadanba. 10-15 maalmood ka dib, waxaad u baahan tahay inaad hubiso dhammaan geedo loo noolaado. Haddii qaar ka mid ah ay duurka u dhintaan, markaa waxay u baahan doonaan in la googooyo xididka, oo meeshoodana waa la aasi doonaa.
Ku saabsan sifooyinka daryeelka ee kala duwan
Si aad u hesho goosashada wanaagsan ee strawberries "Albion", uma baahnid in aad noqoto Fiisooyinka xirfad leh, laakiin waa inaad si joogto ah u daryeelaan ay duurka this.
Ku waraabinta doorka ugu muhiimsan ee nidaamka daryeelka strawberry oo dhan.
Sababtoo ah dabeecadda qoyan ee xooggan ee berrigan ayaa in dhirta ay u baahan tahay in la waraabiyo marar badan. Xaaladaha heerkulka sare ee strawberries ayaa yeelan doona biyo maalin kasta, iyo waraabinta waa inay noqdaan faleebo, si ay dhirta u leeyihiin qoyaan ku filan.
Waxaad ka dhigi kartaa waraabka biyaha lagu cabo, taas oo ah 3 jeer sarihi sariiraha May, Abriil iyo July 10 - 12 litir oo biyo ah, ka dibna uma baahna waraabin waraabin. Waqtiga ubaxyada ama miro-dhiska, waxay noqon doontaa lagama maarmaan in biyaha lagu daadiyo xitaa biyo badan, maaddaama ay tahay inta lagu jiro mudadahan kuwaas oo strawberries u baahan doono qoyaanka inta badan dhan.
Miisaanka dareeraha waa in uu ahaado 20-25 litir mitir labajibbaaran. Biyaha waa inay ahaadaan heerkulka qolka, ugu yaraan 20 ̊C. Biyaha qabow waxay dhaawici karaan baadiyaha hore ee jilicsan iyo caleemaha strawberry. "Albion" waxa uu leeyahay dulqaad duleedkiisu aad u hooseeya, sidaas darteed waxaad u baahan doontaa inaad ka qariso duurka qorraxda xagaaga.
Haddii heerkulka hawadu ka sarreeyo heerka 30 ̊C, markaa fruiting waxay joojin doontaa wadajir.
Iyadoo la'aanta caleemo qoyan ay u engegi doonaan, iyo xad-dhaaf ah - miraha waa mid aad u caato ah iyo dhadhan xun.
U hubso inaad dhulka ku daboolatid mulch, sidaa darteed midhaha, gaar ahaan kuwa caan ah, ha taaban dhulka.
Qalabka ugu fiican wuxuu noqon karaa caws, sida balka ama cirbadaha qallalan. Haddii sariirta strawberry ay sare u kacdo, markaa waxaad dabooli kartaa dhoobada leh polyetylene madow, taas oo kaliya ma ilaalin doonto miraha ka soo xirriirka ciidda, laakiin sidoo kale waxay ku kulmi doontaa kuleylka carrada.
Sida bacriminta, wax walba waa sida caadiga ah. Markaad diyaarinayso ciidda xilli-ciyaareedka cusub, waxaad u baahan tahay inaad wax walba soo qaadato - maaddooyinka organic, potassium, fosfooraska iyo nitrogen.
Xeryaha potassium ayaa si gaar ah loogu baahan yahay strawberries inta lagu jiro sameynta burooyinkeeda iyo miraha, sidaas darteed waa inaad iyaga ku quudiso Bacriminta ku habboon waqtiga saxda ah.
Boric acid waxay kordhin doontaa qiyaasta dalagga, sidaas darteed sariiraha waxaa lagu daaweyn karaa xal xalkan.
Ka hor inta aadan daboolin strawberries, waxaad sidoo kale u baahan doontaa inaad samayso liiska dhan ee Bacriminta, si ay duurka u dhinteen inta lagu jiro xilliga jiilaalka.
Strawberry "Albion" wuxuu noqon doonaa qurux weyn oo loogu talagalay beertaada iyo miiskaaga.
Iyada oo ay tayada sifooyinkaa, caan ka mid ah noocyada kala duwan ayaa sii kordhaya xilli ciyaareed kasta.
Sidaa darteed, ugu dhakhsaha badan aad dhirato dhowr duurka this strawberry this on sawirka, sida ugu dhakhsaha badan waxaad awoodi doontaa inaad ku raaxaysato this berry qurux badan.